» DAAWO: Shacabka Reer Hargeysa oo Halheys ka dhigtay “Ar Famaajo ii geeya” & Midnimada Somalia…Badweyntimes.com
DAAWO: Shacabka Reer Hargeysa oo Halheys ka dhigtay “Ar Famaajo ii geeya” & Midnimada Somalia…
iyadoo maamulka Somaliland uu meel mariyay hishiis halis lagu tilmaamay ayaa Shacabka magaalada Hargeysa waxaa si caro badan uga hadleyn Go’aanka maamulka Somaliland uu Doonayey inuu ku Wareejiyo magaalada Berbera, Waxayna sheegeen inay Xildhibaanada ka Aarsan doonaan.
Mid kamid ah dadkii sida wayn uga qayb qaatay Ololihii Axmed Siilaanyo Xiligii Doorashada ayaa waxay sheegtay inay Hada Diyaar u yihiin inay wax la qabsadaan Shacabka Soomaaliyeed ” Waxaa la garan waayey sidii Soomaaliya wax loola qabsan lahaa, Maanta ayaan idiin cadaynaynaa si toos ah oo dadnimo iyo Raganimo ku Jirto Soomaaliya aynu Ugu biirno, Shacabka Ha Daalinina, Farmaajo ii gaadhsiiya ayaan Leeyahay.” Ayay tidhi.
« Warbixinta Ka HoreysayDhageyso: Mid kamid ah Caqabadaha uu ka tagay Xasan sh, oo Guddi loo Xil saaray….
Warbixinta Xigto »Daawo:Maryam Qaasim oo si yaab leh uga Warbixisay MD. Farmaajo, kana hadashay dawlada iyo Wasiirada cusub